Trinity Development မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် ဖြစ်သော Skype ကို... ချိုသာသော ဈေးနှုန်းများ ဖြင့် လက်လှမ်း ကူညီပါရစေ ။ ။
Home » Services » Business Services » Trinity Development မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် ဖြစ်သော Skype ကို… ချိုသာသော ဈေးနှုန်းများ ဖြင့် လက်လှမ်း ကူညီပါရစေ ။ ။
Trinity Development မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် ဖြစ်သော Skype ကို… ချိုသာသော ဈေးနှုန်းများ ဖြင့် လက်လှမ်း ကူညီပါရစေ ။ ။
Contact Number: 095058441
Email Address: devstudio.trinity@gmail.com
Listed: September 29, 2014 11:18 pm
အင်တာနက် ဖြင့် Skype ကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတကာမှ မိသားစု မိတ်တွေ အပေါင်းအသင်းများကို သင်၏ လက်ကိုင်ဖုန်း/ကွန်ပျူတာမှ တဆင့် ဆက်သွယ် လိုပါသလား ……… ? မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များ အတွက် …. Skype Credit များကို စတင်ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
Skype Credit အတွက် ဈေးနှူန်းများ
$5 = 5500 kyats
$10 =11000 kyats
$20 = 22000 kyats
Subscriptions Plan အတွက် ဈေးနှုန်းများ
Unlimited World = ၁၆၀၀၀ ကျပ်
Canada,China,Guam,Hong Kong, Puerto Rico, Singapore, Thailand, US အစရှိသော နိုင်ငံများအား တစ်လအတွင်း မိနစ် အကန့် အသတ်မရှိ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်
တစ်လအတွင်း မိနစ်အကန့် အသတ်မရှိ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သော နိုင်ငံများ အတွက် ဈေးနှုန်းများ
Singapore = ၉၀၀၀ ကျပ်
Hong Kong = ၉၀၀၀ ကျပ်
Malaysia = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
Korea = ၇၀၀၀ ကျပ်
US = ၉၀၀၀ ကျပ်
တစ်လ အတွင် ခေါ်ဆိုနိုင်သော မိနစ်များ အတွက် ဈေးနှုန်းများ
Singapore ( ၁၂၀ မိနစ်) = ၄၀၀၀ ကျပ်
Singapore ( ၄၀၀ မိနစ်) = ၇၀၀၀ ကျပ်
Malaysia ( ၁၂၀ မိနစ်) = ၆၀၀၀ ကျပ်
Malaysia ( ၄၀၀ မိနစ်) = ၁၂၀၀၀ ကျပ်
Korea ( ၁၂၀ မိနစ် ) = ၄၀၀၀ ကျပ်
Korea ( ၄၀၀ မိနစ် ) = ၈၀၀၀ ကျပ်
Hong Kong ( 120 မိနစ် ) = ၄၀၀၀ ကျပ်
Hong Kong ( ၄၀၀ မိနစ် ) = ၆၀၀၀ ကျပ်
UAE ( ၆၀ မိနစ် ) = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
UAE ( ၁၂၀ မိနစ် ) = ၁၇၀၀၀ ကျပ်
UAE ( ၄၀၀ မိနစ် ) = ၅၀၀၀၀ ကျပ်
တို့အပြင် အခြားသော နိုင်ငံများစွာတို့ကို ချိုသာသော ဈေးနှူန်းများဖြင့် လူကိုယ်တိုင်သော် လည်းကောင်း…. KBZ သို့ CB ဘဏ် များမှ ငွေလွဲဖြင့်သော် လည်းကောင်း .. ဆက်သွယ် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ…..
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက 09-5058441 ကို ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။
Ad Reference ID: 252542971422f457
Business Services For Sale to sell
Listed by: devstudio.trinity
Other items listed by devstudio.trinity
အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် Viber မှ နိုင်ငံတကာသို့ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုပါသလား …..
Latest items listed by devstudio.trinity »
All times are GMT 6.5. The time now is 9:21 pm.